Unyulo jikelele eSpain: iimpendulo zentengiso | Ezezimali
Unyulo ngokubanzi eSpain: iimpendulo zentengiso
Ubuncinci bokungathandabuzeki ababenakho abatyali zimali abancinci nabaphakathi eSpain, obadityaniswa nolonyulo jikelele olwenzeke kule Cawa iphelileyo. Phi I-PSOE iye yaphumelela Lonyulo ngokufikelela kwizihlalo ezili-123, ngenkxaso yama-28,7% yabavoti. Ngelixa ngokuchaseneyo, isimbuku samaqela angaphakathi-ekunene asilele kakhulu ekubeni babe nako ukwenza urhulumente. Ngoku kuhlala kusonjululwa ukuba ngaba uMongameli uSánchez uzakwenza urhulumente namanye amaqela aphiko lasekhohlo okanye ukuba, ngokuchaseneyo, uya kuvumelana nomkhosi wecentrist weCiudadanos.
Iziphumo zonyulo ezingachaphazeliyo iimarike zezabelo ngokugqithileyo, ngaphandle kwamacandelo emarike yemasheya anononophelo olukhulu kulo msitho wezopolitiko. Njengokuba, umzekelo, iibhanki kunye neenkampani zombane Ukuba babonile ukuba amaxabiso abo aphenjelelwe njani sisiphumo solonyulo olwenzeke eSpain. Isikhundla sabahlalutyi bezemali asicacanga nokuba, kuba abanye becinga ukuba intengiso ihlala isoyikwa ngoorhulumente bamaphiko asekhohlo.
Ngelixa kwelinye, kukho ezinye izimvo ezingathathi hlangothi ngakumbi ekuboniseni ukuba intengiso yezemali iya kushukunyiswa zizinto zehlabathi, hayi ngenxa yonyulo. Into ethi ibonakale iqhelekile kwilizwe liphela njengakwilizwe jikelele nalapho imeko zoqoqosho lwamazwe ngamazwe zinobunzima kwizigqibo zabatyali zimali kunokhetho lwelizwe. Ukusuka kolu luvo ngokubanzi, akubonakali ngathi unyulo eSpain luza kuba namandla kakhulu ukuba lube nefuthe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Ukuba kuphela kwikota elifutshane, oko kukuthi, kwiintsuku zokuqala yale veki.
1 Unyulo: iziphumo zonyulo
2 Ibex ayihlali kakuhle kunyulo
3 Ibex 35: ukwehla okuncinci
4 Lindela uthethathethwano
5 Ukuphendula kwiintsuku ezimbalwa ezizayo
Unyulo: iziphumo zonyulo
Ngexesha leeyure emva kokuba iziphumo zonyulo jikelele zivelisiwe, bekungekho ukusilela kwamazwi avela kubaphathi beemali ezinkulu ababonisa ukuba Iziphumo kufuneka ziqinisekise kwiimarike ingeniso eguquguqukayo. Ngengqiqo yokuba into eyahluke kakhulu kwezopolitiko kwaye eyahlukileyo licandelo lemali. Ngapha koko, ayinakulityalwa ukuba imarike yestokhwe sikazwelonke ibisetyenziselwa ukudlala nalowo uphumeleleyo kolu nyulo lubalulekileyo eSpain, iPSOE. Esinye isizathu esinyanzelisayo sokushukuma okukhulu kunye nokuguquguquka ukuba kwenzeke kwiipaki zokulingana zesizwe.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa kwesi sihlandlo ukuba ezi ziphumo zinganceda ukucima amathandabuzo abekhona kwinxalenye enkulu yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngengqiqo yokuba inokuvelisa ukunyuka xa kudlula iintsuku ezimbalwa kunye neemarike zokulingana lungiselela ezi ziphumo. Ke ngale ndlela, unokufumana ukuthengwa kwezabelo ngamaxabiso okhuphiswano ngakumbi kunangaphambili, nokuba umahluko wawo ubuncinci, njengoko kunokubonwa kwezi ntsuku.
Ibex ayihlali kakuhle kunyulo
Kwelinye icala, akufuneki ilibale ukuba isalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex 35, ihlala ihleli iwile kwi-100% ye- iiseshoni zasemva konyulo ukusukela ngo-1992. Kodwa kufanele kuqatshelwe ukuba phantse kuzo zonke iimeko kuye kwakho utshintsho kurhulumente kwaye kweli ityeli khange kube njalo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuyafana nento ebesinayo ngaphambi konyulo kwilizwe lethu. Kwaye le nyani inokunciphisa ukwehla kumaxabiso ezabelo kwiintsuku ezizayo. Ukuya kwinqanaba lokuba zinokubangabalulekanga kakhulu.
Ukusuka kule meko ngokubanzi, kubonakala ngathi akukho nto yoyikayo kubatyali mali abancinci nabaphakathi ekufuneka bexhalabile ngeminye imiba. Umzekelo, ukuba i-Ibex 35 iyayihlonipha inkxaso efanelekileyo inayo kumanqanaba e-9.100 okanye amanqaku angama-9.200. Kungenxa yokuba inokuba linyathelo lokonyuka okutsha kokulingana kweSpanish. Ukwazi ngakumbi ezinye iibhegi ezingaphandle kwemida yethu kunokhetho ngokwabo. Kwinto emiselweyo njenge-panorama ebusayo ngosuku olulandelayo emva kolu nyulo lubalulekileyo lonyulo.
Ibex 35: ukwehla okuncinci
Isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, kubonakala ngathi khange sichaphazeleke zezi ziphumo zonyulo. Ngokwehla nje ngemini emva koko zizishumi ezimbalwa zepesenti ngokubhekisele kwixabiso layo. Into ekufuneka ithathelwe ingqalelo njengesiqhelo ngokupheleleyo nakuyo yonke ingcinga. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, ngokuhambelana nentsingiselo ebekwe zezinye izikwere zamanye amazwe kwindalo esingqongileyo. Ngaphandle kokuba kubekho nayiphi na intshukumo ebaluleke ngokukodwa ekwenziweni kwamaxabiso. Ngaphandle kokwahluka okunengqiqo ngandlela thile.
Ngelixa kwelinye icala, bekungekho macandelo esitokhwe anovakalelo ukuba anyuke okanye awe ngenxa yale nto yezopolitiko. Oko kukuthi, yonke into ithule kakhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi, ngaphandle kokuba ayiloncedo kwimisebenzi yabo yokurhweba njengoko umntu enokucinga ekupheleni kosuku ngeCawa. Ukuba, kwelinye icala, usuku njengabaninzi kwiiseshoni zokugqibela zentengiso. Kunye umthamo wekhontrakthi ukuba kufuneka ihlelwe njengesiqhelo ngokupheleleyo kule mihla yonyaka. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko zokukhuselwa esidlangalaleni.
Oku kubekwa maxabiso kumaxabiso esitokhwe kutolikwa ziiarhente zezemali njengekhampasi yokulinda phambi kwe uthetha-thethwano namanye amaqela ezopolitiko kwaye benze urhulumente kwiinyanga ezizayo. Kunokubakho isitshixo ekuphuhliseni esinye isicwangciso-mali sokwenza utyalo-mali ukwenza ingeniso ngeli xesha lonyaka. Ngelixa kwelinye icala, ukujonga konke kwabatyali mali kujolise kwimicimbi efanelekileyo ngakumbi kwiimarike zezabelo. Umzekelo, umgaqo-nkqubo wezemali kumacala omabini e-Atlantic. Malunga nokuba amaqondo wenzala anokunyuka nini kwaye phantsi kwantoni inzala yokuhamba kwemali kuya kwenziwa.
Kwelinye icala, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba imarike yemasheya yaseSpain, ngakumbi i-Ibex 35, ingumzuzu obaluleke kakhulu inkcazo ngendlela enye okanye enye. Kwaye nakuphi na ukwahluka kokudityaniswa kwamaxabiso kunokukhokelela ekubeni imeko yabo ibe ye-bearish okanye inyusa. Ngempembelelo yeqhinga lokusebenza ekusebenzeni kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ayothusi into yokuba okwangoku sijongane nemeko yokungaqiniseki kwaye enokwenzakalisa abasebenzisi ekuthatheni amanyathelo malunga noko kufuneka bekwenzile kwiimarike zezabelo.
Ukuphendula kwiintsuku ezimbalwa ezizayo
Ngayiphi na imeko, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokujonga kakhulu into enokwenzeka kwiintsuku ezizayo, nangona besazi ukuba ukutshintshiselana kwesitokhwe kuzwelonke nakwamanye amazwe kuya kuvalwa ngoLwesithathu ngenxa yeholide kaMeyi XNUMX. Oku kuya kuba kukuphumla okuncinci kwinto enokwenzeka kwezi ntsuku zilandelayo. Kuba nayiphi na ukuvula iingxoxo Ingathetha utshintsho kwindlela yokuthengisa kwiimarike zezabelo. Ngaphaya kwemeko yobuchwephesha bayo ngoku ukuza kuthi ga ngoku akukho kubi kwaphela. Ngazo zonke izalathiso ezichanekileyo kwiinyanga ezine zokuqala zonyaka, into ebinenxalenye enkulu yabahlalutyi kwezi marike zezemali.
Kodwa nangayiphi na imeko, inye into yokuba abatyali mali abancinci nabaphakathi bacace gca malunga nayo, kwaye kukuba bayazi ezinye izinto ngaphandle kophuhliso lukarhulumente uqobo eSpain. Apho kungenakulityalwa ukuba kwiinyanga ezimbalwa ezizayo kuya kuba yinto ephambili ekwazini apho iimarike zezabelo zisingise khona. Zombini kwilizwe lethu nangaphandle kwemida yethu kwaye kuya kufaneleka kakhulu ukuthatha isigqibo sokuthatha isikhundla kwiimarike zezemali okanye hayi. Okwangoku, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokulinda kancinci kwaye ukuba kukho nantoni na, yenza enye intengiselwano yokusebenza kwezemali ngononophelo olukhulu. Kuba umngcipheko ukhona kwaye unokusenza sidlale iqhinga elidlulileyo nangaliphi na ixesha.
Ukunyaniseka okukhulu lolunye uthotho lweempawu ezibonisa ithuba elifanelekileyo lokuthenga okanye lokuthengisa kwimarike yemasheya. Olunye lwale miqondiso zizikhewu, ezithi, ngokubanzi, zichazwe njengendawo okanye uluhlu lwamaxabiso ekungakhange kwenziwe msebenzi. Umzekelo, kwi-uptrend singathi kukho umsantsa kwitshathi yemihla ngemihla xa isithunzi esiphantsi sosuku olunye singaphezulu kwesithunzi sosuku lwangaphambili. Kwi-downtrend, ubuninzi besithunzi sosuku olunye buya kuba ngaphantsi kobuncinci besithunzi sosuku oludlulileyo. Kulo mgca, ukuze kubekho isithuba esinyukayo sokukhula kwitshathi yeveki okanye yenyanga, kuya kufuneka ukuba elona nqanaba liphantsi lirekhodiweyo phakathi evekini okanye ngenyanga libe ngaphezulu kunelona liphezulu lifikelelweyo kwiveki ephelileyo okanye kwinyanga ngokulandelelana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Unyulo ngokubanzi eSpain: iimpendulo zentengiso
Imibuzo emi-6 abanokuzibuza yona abatyali mali